Amagama – iAfrika
Igama lomuntu liba nencazelo akujwayele ukuba yigama nje. Umntwana engethiwa igama kususelwa esenzeni nasezifisweni zabazali, esimweni azalelwe phansi kwaso njalonjalo. Ngamafuphi nje, ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande (2001), amagama anikwa abesizwe samaZulu esuselwa kuloku okulandelayo: Inkolo yobuKristu neyeSintu Isib.: igama elithi Sahluko. Ukubaluleka kukamama noma ubaba emndenini Isib.: Ntombikayise. Ukubaluleka komfana noma intombazane emndenini Isib.: Makhosazane … Read more
Tags Amagama, Amagama abantu
Ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande, amaZulu akholelwa ekutheni umntwana uyisipho esivela kuMvelingqangi. Umntwana uyaye ethiwe igama njengendlela yokubonga ubukhulu namandla kaMvelingqangi ekuphumeleliseni ukuzalwa komntwana. Njengasemazweni amaningi ezwenikazi i-Afrika, inkolo yobuKrestu ilandelwa izinkumbi zabantu eNingizimu Afrika. UbuKrestu bunomthelela omkhulu kusikompilo lakuleli kanye nakwezepolitiki. Impande yalomthelela wukufika kwemikhumbi yongxiwankulu kuleli ngeminyaka yo-1600. Izibonelo, ngokuthulwa nguNdimande, zamagama asuswa enkolweni … Read more
Amagama asuselwa esimweni sokuzalwa komntwana
Sisaqhuba kuyona ingosi ngokuchaza ngempande yamagama abantu ngokwesiZulu. Kulena, siveza ngamagama okuqanjwa komntwana ngokubheka isimo azalelwa kuso. Ngokuloba kukaNdimande (2001), kubantu abangamaZulu, eqinisweni kubeNguni nje bebonke, ngokwenqubo yakhona, kuyaye kube khona izinto ezingakhulumeki noma zixoxeke. Lezi zinto ziyaye zivele ngokuthi kwethiwe abantwana amagama axoxa ngazo, ikakhulukazi izinto ezifana nokukhulelwa kwentombazane ingazi ukuthi ikhuleliswe ngubani, kanjalo … Read more
Tags Amagama, Izimo